Home Wararka Gudaha Ahmed moalim Hassan oo guul u soo hooyay system ka Dowladnimo ee...
Ahmed moalim Hassan oo guul u soo hooyay system ka Dowladnimo ee Somalia.
Mudane Ahmed moalim Hassan waa Agaasimaha Duulista hawadda ee Somalia muddo baddan Dalkeenna waxaa dhibaato ku aheyd inneey isku aaminnaa Diyaaradaha caalamigaa sababtoo ah meysan jirrin damaanadqaad Amma qallab casri ah oo xaqiijin karro badbaadadda diyaaradaha caalamigaa ee Dul maraayo hawadda Somalia.
Agaasime Ahmed moalim Hassan waa shaqsiga nool maanta ee Somali-ga ah aqoon iyo xirfad duruqsan u leh maamulka Civil Aviationka waanna cilmi inta badan lawadda barran qof Somali ahne uusan waqti ku bixin innuu barto taas ayaanna keentay in Agaasime Ahmed moalim Hassan uu noqdo Human Capital hanti Qaran wadda anfacay shacabka soomaaliyeed.
Agaasime Ahmed moalim Hassan xafiiska markuu immaaday wuxuu ka shaqeeyay innuu salka dhulka u dhigo maamulka hawadda Somalia kanna dhigo mid laggu kalsoonaan karo qalabka lagga hago hawadda Somalia ee hadda dalka uu Agaasime Ahmed moalim Hassan keennay waa midka uggu qalisan Caalamka waxaanna istimcaallo oo keliyah Europe America iyo Canada Dal Africa 🌍 ah oo heysto qalabka hawadda Somalia laggu controlo majiro marka lagga reebo South America iyo Egypt.
Maanta waxaa si toos ah hawadda Somalia u ongolaaday inneey istimcaallaan Diyaaradaha reer Europe madaama aay noqotay hawadda Somalia 🇸🇴 mid leysku haleyn karro mar aan wax ka weydiinay Agaasimaha haayadda qaabka aay macquul ku noqon karto in hawadda Somalia halmar lagga maamulo in ka baddan 100 duulimaad saacad gudoheed wuxuunna nooggu jawaabaay.
“Duulimaad-yadda Somalia istimcaallo hadda wax dhib ah kumma qabaan sababtoo ah baahi walba oo keenni karto in duulimaadyaddu kalsooni ku qabbi waayaan waan daboolnay hal Daqiiqo ayaa kalla maamulnaa in ka badan 87 duulimaad taasna waxa aay nagga dhigtay innaan noqono Dal Civil Aviation addag leh “
Previous articleXasan Sheekh Oo Baaq U Diray Shacabka Soomaaliyeed
Next articleDaawo:- laba muuqaal iska soo horjeedo Dagaal Maaliyaadd Beesha Xaruun Cali oo ku qadeen Booco Gobolka Hiiraan waxa sheegtay Maamulka Fashilmay ee Gobolka Hiiraan iyo Ciidamada DFS